“Dadka gaystay labadii weerar ee Galkacyo iyo Balli-busle waa kuwo aan ehel u ahayn nabadda iyo wada-noolaansha” Guddoomiyaha gobolka Cuuke. – Radio Daljir
Galkacyo June 08- Maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa si kulul u cambaareeyey dhacdo weerar oo saaka waabarigii ka dhacday xaafadda Wadajir ee magaalada Galkacyo taasoo sababtay dhimasho dad gaaraya 4 ruux inta la hubo iyo dhaawac ka badan 12 qof.
Guddoomiyaha gobolka Mudug ahna duqa magaalada Galkacyo Cabdiraxmaan Maxamuud Cuuke oo shir jaraa?id ku qabtay aqalka madaxtooyada ee magaalada Galkacyo ayaa weerarkaasi iyo midkii ka sii horreeyey ee habeen hore ka dhacay tuulada Balli-busle ku tilmaamay weeraro waxash-nimo oo meel-ka-dhac ku ah diinta iyo dhaqanka suubban intaba.
Guddoomiyuhu waxaa sheegay dadka weeraradaasi labada ah gaystay in aysan ahayn dad ehel iyo saaxiib midna u ah nabadda iyo wada-noolaansha dadyawga deggan gobolka, waxaana uu intaasi ku daray in loo baahan yahay meel in looga soo wada-jeedsado falalka noocaan ah, dhinacyada kala duwan ee bulshaduna u istaagaan xakamaynta arrinkaani.
Md. Cuuke, waxaa uu tilmaamay maamullada labada dhinac in ay ka wada hadleen arrimihii dhacay la isla garawsaday gacan bir ah in lagu qabto amniga iyo nabad-galyada iyadoo laga hor-tagyo dhicitaanka falal caynkaan oo kale ah.
Guddoomiyaha ayaa gaba-gabadii shirkiisaas jaraa?id soo jeediyey baaq-nabadeed oo uu ku dalbanayey in la joojiyo dhibaatada colaadeed, dadkuna ay muujiyaan dulqaad iyo deggaanan nabad-raadineed.
Cambaaraynta maamulka ayaa timid kaddib markii labo weerar oo la isla xiriirinayo saaka iyo habeen hore ay ka kala dhaceen Galkacyo iyo tuulada Balli-busle kuwaasi oo isku gayntooda ay ka dhasheen khasaaro dhimasho oo gaarsiisan illaa 15 ruux iyo dhaawaca ku dhawaad 30 qof oo kale.